Ahoana ny manjavozavo amin'ny Photoshop | Creatives Online
Efa te hahalala foana ve ianao ny fomba blur amin'ny photoshop fa tsy nidina niasa ianao raha tsy mila izany? Na dia mety hihevitra aza ianao fa mora izany, ny marina dia tsy maintsy mandinika lafin-javatra maromaro ianao mba hanomezana azy io ho matihanina. Ary, ambonin'ny zavatra rehetra, mba hahafahana mampifangaro azy amin'ny lamosina, eo anelanelan'ny sary, na manao ny sary ho mangarahara kokoa.
Ahoana anefa no hanaovana izany? Eto izahay dia manampy anao hahatakatra ny fomba manjavozavo sary ary manao izany amin'ny teknika isan-karazany amin'ny Photoshop. Aza adino izany!
1 Andraso, inona no atao hoe smudging?
2 Manjavozavo amin'ny Photoshop
2.1 Sosotra amin'ny fitaovana blur
2.2 Manjavozavo amin'ny borosy
2.3 Gaussian blur sivana
2.4 Radial blur
2.5 Mihetsika ny fihetsiketsehana
2.6 Lens blur
2.7 Manjavozavo ny tarehy
3 Dingana hametahana ao amin'ny Photoshop
3.1 Manjavozavo miaraka amin'ny Gaussian blur
3.2 Sosotra amin'ny borosy
Andraso, inona no atao hoe smudging?
Alohan'ny hanomezana anao ny dingana hametahana ao amin'ny Photoshop dia zava-dehibe ny fahazoanao izay tiana holazaina amin'ny alàlan'ny blurring.
Ity teny ity enti-milaza ny fanesorana ny sasany mazava amin'ny sary, tsy mazava loatra, fa zavatra iray, tontolo iainana, sary na ampahany amin'ny sary dia hita ho manjavozavo.
Nahoana no tiantsika ny hampiasa azy io? Eny, satria miteraka fihetseham-po amin'ny fihetsiketsehana izany, ka mahatonga ny ampahany tiantsika ho ivon'ny sary ho toy ny tena misy.
Mba hahatratrarana izany dia ampiasaina ny fitaovana manjavozavo, saingy tokony ho fantatrao fa misy fitaovana maromaro amin'ity karazana ity ao amin'ny Photoshop.
Un Ohatra mazava tsara amin'ny hoe manjavozavo ny hoe rehefa maka sary mihetsika isika. Araka ny hitanao, ny sary dia mivoaka ho toy ny mihetsika, ary izany no mahasarika ny hetsika, izay no mahatonga ny toetra manjavozavo hiseho. Ahoana anefa raha tiantsika hanjavozavo ny lamosina sy hitazonana ilay tarehimarika afovoany? Izany no azonao tratrarina amin'ny programa fanitsiana sary.
Manjavozavo amin'ny Photoshop
Rehefa mazava tsara ny teny filamatra dia izao no fotoana hanombohana miasa. Tokony ho fantatrao anefa izany Ny Photoshop dia tsy manana fitaovana fandotoana fotsiny. Raha ny marina dia misy maromaro tokony ho fantatrao satria, miankina amin'ny asa manjavozavo tsy maintsy ataonao, ny iray na ny iray dia ho tsara kokoa. Miresaka momba azy rehetra izahay.
Sosotra amin'ny fitaovana blur
Ny iray amin'ireo fitaovana voalohany amin'ny programa dia ny blur. Tsy vitan'ny hoe mihetsika eo amin'ny sary ihany io, fa afaka manatsara ny fifantohana rehefa manampy flair.
Ity fitaovana ity dia ao amin'ny tontonana fitaovana havia ary mamela anao hamorona background manjavozavo, blur marivo, sns.
Araka ny voalazanay, dia ambony kokoa noho ny amin'ny fitaovana hafa, fa tena mahomby rehefa mila zavatra malama mba hanasongadinana ny hetsika amin'ny zavatra raikitra.
Manjavozavo amin'ny borosy
Ny iray amin'ireo fitaovana hanamaivanana dia, tsy isalasalana, ny fampiasana ny borosy. Miaraka amin'izany, dia ho afaka ny malama faritra samy hafa sy noho ny fanampian'ny ny blur fitaovana, ary ny sasany hatevin'ny borosy, dia ho afaka ny "hoso-doko" ao amin'ireo faritra izay tianao ho toy ny misy hetsika.
Ny tombony amin'ity fitaovana ity dia ny hoe, raha tsy tianao ny endriny dia afaka miverina manomboka indray ianao na dia tsy mila manomboka amin'ny scratch aza, satria hamafa araka izay efa nataonao.
Gaussian blur sivana
Ity angamba no iray amin'ireo fitaovana blurring malaza indrindra amin'ny Photoshop, fa raha ny marina, ary araka ny hitanao, dia tsy izy irery no manana azy. Raha izany dia, Ny gaussian blur dia ahafahanao manitsy ny karazana blur manala azy miaraka amin'ny fiantraikany manjavozavo.
Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fizarana momba ny sivana, blur ary Gaussian blur.
Avy eo dia hiseho ny efijery izay ahitana ampahany amin'ny sary. Tsy maintsy mametraka teboka iray izay lasa afovoany ianao ary, miaraka amin'ny tontonana ambany, hamaritana hoe hatraiza no tianao ny blur.
Safidy iray hafa hanjavona dia ny radial blur, ny tanjona dia ny hahatonga anao hino fa misy fihodinan'ny fakantsary. Izany hoe rehefa maka ny sary dia nihodina ny fakan-tsary ka niteraka blur malefaka.
Amin'ireo tranga ireo dia miasa tsara kokoa izy io rehefa misy teboka afovoany satria ny zavatra ataonao dia "mamindra" ny ambadiky ny sary. Fa raha manjavozavo amin'ny faritra iray no tadiavinao, dia mety tsy ho tsara ny vokatra.
Mihetsika ny fihetsiketsehana
Alao sary an-tsaina hoe ao anaty fiara ianao amin'ny hafainganam-pandeha avo dia avo. Ny mahazatra dia tsy afaka manavaka ny singa sasany hitanao ianao, fa fantatrao fa misy izy ireo. Raha naka sary ianao dia hanjavozavo ny zava-drehetra. koa, miaraka amin'ity sivana ity dia misy vokany mitovy.
Izy io dia momba ny fanomezana hetsika ny sary amin'ny filalaovana ny zoro manjavozavo sy ny halavirana.
Sivana hafa izay ananan'ny Photoshop dia blur lens. Ny tanjonao dia omeo halalinina kokoa ny sary, fa manao izany amin'ny fanaovana ny sisa amin'ny tontolon'ny tany, ny lafika na ny singa manodidina an'io teboka afovoany io ho manjavozavo kokoa.
Ny tsara dia ny fandaharana dia mamela anao hanova amin'ny lafiny iray ny sary afovoany ary, amin'ny lafiny iray, ny tontolo iainana mihitsy.
Manjavozavo ny tarehy
Araka ny voalazanay tany am-boalohany, ny fianarana manjavozavo amin'ny Photoshop dia azo atao amin'ny tanjona fampifangaroana sary roa na maromaro ary mitovy ny fijery azy, fa tsy mila manova ny sisiny, sa tsy izany?
Eny ary, mba hanaovana izany, azonao atao ny mampiasa ity fitaovana ity, izay ahafahanao manafoana izay manakana ny sary roa tsy hitambatra.
Dingana hametahana ao amin'ny Photoshop
Satria tianay ho fantatrao ny fomba manjavozavo ao amin'ny Photoshop, ireto ny dingana amin'ny fitaovana roa samihafa:
Manjavozavo miaraka amin'ny Gaussian blur
Atombohy amin'ny fanokafana ny programa sy ny sary tianao hanjavozavo. Manaraka, mandehana any amin'ny Filters / Blur / Gaussian Blur.
Ao amin'ny varavarankely izay miseho dia hanana radius azonao fantarina ary koa fitaratra fanamafisam-peo misy marika 'minus' ary iray hafa misy marika 'plus'. Eo anelanelan'izy roa ireo dia misy tarehimarika iray isan-jato.
Izany dia ahafahanao mampitombo na mampihena ny radius ary koa ny hamafiny rehefa manjavozavo.
Rehefa afa-po amin'ny blur ianao dia kitiho ny Ok ary hanao izany ho azy eo amin'ny sarinao.
Amin'ity tranga ity dia azonao atao koa ny manjavozavo afa-tsy ampahany amin'ny sary raha mampiasa ny fitaovana fisafidianana aloha ianao.
Sosotra amin'ny borosy
Raha tianao ny hanao a tena malefaka blur ary afa-tsy amin`ny ampahany amin`ny sary, dia tsara ny mampiasa ny borosy manjavozavo. Mba hanaovana izany, sokafy ny sary ao amin'ny Photoshop ary, eo amin'ireo fitaovana anananao eo ankavia, dia ho hitanao fa misy blur izay ho toy ny rantsantanana na borosy. Mila mifidy azy fotsiny ianao, mamaritra ny habeny sy ny hamafiny, ary tsindrio miaraka aminy eo amin'ny sary izay tianao hanjavozavo kokoa.
Hitanao ve ny fomba mora sy miovaova azonao atao manjavozavo amin'ny Photoshop?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Ahoana ny fomba fametahana amin'ny Photoshop
Ny endritsoratra Serif be mpampiasa indrindra